मासिक धर्म - विकिपीडिया
यो एउटा अनाथ (एक्लो) पृष्ठको रुपमा छ, यो पृष्ठ कुनै पनि पृष्ठसित नजोडिएको अथवा एक-दुइवटा वटासित मात्र जोडिएको हुन सक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखबाट; यस पृष्ठसित लिङ्क जोड़्न सहायता गर्नुहोस् सुझाव यहाँ उपलब्ध हुनसक्छ। (सेप्टेम्बर २०११)
१० देखि १५ वर्षसम्मका आयूका किशोरीको अंडाशय प्रत्येक महिना एक विकसित डिम्ब (अण्डा) उत्पन्न गर्न शुरू गर्दछन्। त्यो अण्डा अण्डवाहिका नली (फैलोपियन ट्यूव)द्वारा तल जान्छ जसले अंडाशयलाई गर्भाशयसित जोड्छ। जब अण्डा गर्भाशयमा पुग्छ, उनको अस्तर रक्त र तरल पदार्थले गाढ़ा हुन्छ। यस्तो यसैले हुन्छ कि यदि अण्डा उर्वरित हो जाए, त त्यो बढ़ सके र शिशुको जन्मको लागि उनको स्तरमा विकसित हो सके। यदि उनी डिम्बको पुरूषको शुक्राणु से सम्मिलन न हो त त्यो स्राव बनछ जुन कि योनि से निष्कासित हुन्छ। त्यहि स्रावको मासिक धर्म, रजोधर्म या महिनावारी (Menstural Cycle or MC) भन्छन्ं।
महिनावारी चक्रको सामान्य अवधि के हो? [सम्पादन गर्ने]
महिनावारी चक्र महीनाहरूमा एक पल्ट हुन्छ, सामान्यतः 28 देखि 32 दिनहरूमा एक पल्ट। हुनत धेरैजसो महिनावारीको समय तीन देखि पांच दिन रहन्छ तर दुई देखि सात दिन सम्मको अवधिलाई सामान्य मानिन्छ।
महिनावारी सम्बन्धी समस्याहरू [सम्पादन गर्ने]
धेरैजसो महिलाहरू महिनावारी (Menstrual cycle)को समस्याले गर्दा दुखि हुन्छन् तर अज्ञानतावश या फेरि लाग वा झन्झटको कारणले गर्दा लगातार यस समस्यासँग जूधि रहन्छन्। यस्तोमा समस्या बताउन भन्दा पहिले यो थाहा हुन आवश्यक छ कि महिनावारी के हो। खासमा दस देखि पन्द्र वर्षको केटीहरूको अण्डाशय हरेक महीनामा एक परिपक्व अण्डा या अण्डाणु उत्पादन गर्न थाल्छ। त्यो अण्डा डिम्बवाही थैली (फेलोपियन ट्यूब)मा सञ्चरण गर्दछ जुन कि अण्डाशयको गर्भाशय से जोड्छ। जब अण्डा गर्भाशयमा पुग्छ त रक्त एवं तरल पदार्थ सँग मिलेर उनको अस्तर गाढा हुन थाल्छ। यो त्यतिखेर हुन्छ जब कि अण्डा उपजाऊ हो,त्यो बढ्छ, अस्तरको भित्र विकसित भएर बच्चा बनछ। गाढ़ा अस्तर उतर जान्छ र त्यो महिनावारीको रूधिर स्राव बनछ, जुन कि योनि द्धारा शरीर भन्दा बाहिर निस्किन्छ जान्छ। जस समयमा रक्त स्राव भइ रहन्छ त्यसलाई महिनावारी अवधि/पीरियड भन्छन्। आइमाइको प्रजनन अंगहरूमा हुने वाला बदलावहरूको आवर्तन चक्रलाइ महिनावारी चक्र भन्छन्। यो हरमोन तन्त्रको नियन्त्रणमा रहन्छ एवं प्रजननको लागि आवश्यक पनि हुन्छ। महिनावारी चक्रको गिनती रूधिर स्रावको पहिले दिनले गरिन्छ किन भनें रजोधर्म प्रारम्भको हरमोन चक्रले घनिष्ट तालमेल रहइन्छ। महिनावारीको रूधिर स्राव हरेक महीनाहरूमा एक पल्ट 28 से 32 दिनहरूको अन्तरालमा हुन्छ। तर महिलाहरूलाई यो सम्झना गर्नु पर्छ कि महिनावारी चक्रको कुनै पनि समय गर्भ होनेको सम्भावना छ।
पीडा दायक महिनावारी के हो?
पीडा दायक महिनावारीमा तल्लो उदरमा ऐंठनभरी पीडा हुन्छ। कुनै आइमाइको छिटो दुखाइ हुन सक्छ जुन आउने र जाने हुन्छ या मन्द रूपमा घोंच्ने खालकोदुखाइ हुन सक्छ। यसले गर्दा पीठमा दुख्न सक्छ। दुखाइ धेरै दिन पहिले देखि पनि शुरू हुन सक्छ र महिनावारीको एकदम पहिले पनि हुन सक्छ। महिनावारीको रक्तस्राव कम हुने वित्तिकै सामान्यतः यो सकिन्छ।
पीडादायक महिनावारीमा तपाईंले घरमा के गरेर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
निम्नलिखित उपचार गर्न सकिन्छ कि तपाईंलाई पर्चेमा लेखीएका दबाइहरू बाट बचाउन सकियोस। (1) आफ्नो उदरको तल्लो भाग (नाभि भन्दा तल) तातोले सेक्नुहोस। ध्यान राख्नुहोस कि सेक्ने प्याडलाइ राखेर नसुत्नुहोला। (2) गर्म जल से स्नान करें। (3) गर्म पेय नै पियें। (4) तल्लो उदरको आसपास आफ्नो औंलाहरूको पोरों से गोल गोल हल्की मालिश करें। (5) सैर करें या नियमित रूपले व्यायाम करें र उनमा श्रोणीको घुमाने वाला व्यायाम पनि करें। (6) साबुत अनाज, फल र सब्जिहरू जस्तै मिश्रित कार्बोहाइड्रेटस से भरपूर आहार लेंमा उनमा नुन, चीनी, मदिरा एवं कैफीनको मात्रा कम हो। (7) हल्के तर थोडे-थोडे अन्तरालमा भोजन करें। (8) ध्यान अथवा योग जस्तो विश्राम परक प्रविधीहरूको प्रयोग करें। (9) तल लेटनेमा आफ्नो टांगे ऊंची गरेर रखें या घुटनहरूलाई मोडकर कुनै एक ओर सोयें।
पीडादायक महिनावारीको लागि डाक्टर से कब परामर्श लिनु पर्छ?
यदि स्व-उपचार से लगातार तीन महीनाहरूमा दुखाइ ठीक न हो या रक्तको ठूला-ठूला थक्के निकलते हुन् त डाक्टर से परामर्श लिनु पर्छ। यदि महिनावारी होनेको पांच भन्दा अधिक दिन पहिले से दुखाइ होने लगे र महिनावारी पछि पनि होती रहे तब पनि डाक्टरको नजीकै जाना जाहिए।
महिनावारीले पहि लि गर्‍यो स्थितिको के लक्षण हुन् ?
माहवारी होने भन्दा पहिले (पीएमएस)को लक्षणहरूको नाता महिनावारी चक्रले नै हुन्छ। सामान्यतः यिनीहरू लक्षण महिनावारी शुरू होनेको5से 11 दिन पहिले शुरू हो जान्छन्। महिनावारी शुरू भए पछि सामान्यतः लक्षण बन्द हो जान्छन् या फेरि केही समय पछि बन्द हो जान्छन्। यिनी लक्षणहरूमा सिर दुखाइ, खुट्टाहरूमा सुनिंनु, पीठ दुखाइ, पेटमा मरोड, स्तनहरूको ढीलापन अथवा फूल जानेको अनुभूति हुन्छ।
पी.एम.एस. (माहवारी भन्दा पहिले रोग)को कारण के हुन्?
पी.एम.एस.को कारण जाना हैन जा सका छ। यो अधिकतर 20 से 40 वर्षहरूको आइमाइहरूमा हुन्छ, एक बच्चाहरूको मां या जसको परिवारमा कहिल्यै कुनै दबावमा रहयो हो, या पहिले बच्चाहरूको होने पछि दबावको कारण लाइई महिला बीमार रही हो- उनिलाई हुन्छ।
पी.एम.एस (माहवारीको पहि लि गर्‍यो रोग)को घरमा कसरि उपचार हुन सक्छ?
पी.एम.एसको स्व- उपचारमा शामिल छ-
(1) नियमित व्यायाम – प्रतिदिन 20 मिनेटले आधा घन्टा तक, जसमा छिटो चलना र साईकिल चलान पनि शामिल छ।
(2) आहारपरक उपाय साबुत अनाज, सब्जिहरू र फलहरूलाई बढ़ाने तथा नुन, चीनी एवं कफीको घटाने या बिल्कुल बन्द गर्न से लाभ हुन सक्छ।
(3) दैनिक डायरी बनाएं या रोजको रिकार्ड रखें कि लक्षण कसरि थिए, कितने छिटो थिए र कितनी अबेर सम्म रहे। लक्षणहरूको डायरी कम से कम तीन महीनाहरू सम्म रखें। यसले डाक्टरको न केवल सही निदान ढ़ंढने मे मदद मिलेगी, उपचारको उचित विधि बतानमा पनि सहायता मिलेगी।
(4) उचित विश्राम पनि महत्वपूर्ण छ।
माहवारीको स्रावको कब भारी मानिन्छ?
यदि लगातार छ घन्टे सम्म हरेक घन्टा सैनेटरी पैड स्रावको सोख गरेर भर जान्छ त उसलाई भारी पीरियड भनिन्छ।
भारी महिनावारीको स्रावको सामाय कारण के हुन्?
भारी महिनावारी स्रावको कारणहरूमा शामिल छ –
(1) गर्भाषयको अस्तरमा केही निस्किनु।
(2) जसलाई अपक्रियात्मक गर्भाषय रक्त स्राव भनिन्छ। जसको व्याख्या हुन पाएको छैन।
(3) थायराइड ग्रन्थिका समस्याहरू
(4) रगतको थक्के बन्ने रोग
(5) अन्तरा गर्भाषय उपकरण
लामा महिनावारी पीरियड कसलाइ भन्छन्?
लामा पीरियड ति हुन् जुन कि सात दिन भन्दा पनि बढी चलेमा। लामा महिनावारी पीरियडको सामान्यको कारण के हुन्?(1)अण्डकोषमा पुटि (2) धेरै पल्ट कारण थाहा हुँदैन भने त्यसलाई अपक्रियात्मक गर्भाषय रक्त स्राव भन्छन् (3) रक्त स्रावमा खराबी र थाकेको रोकनको लागि लिइने दवाईहरू (4) दबावको कारण महिनावारी पीरियड लामा हुन सक्छन्।
अनियमित महिनावारी पीरियड के हुन्?
अनियमित महिनावारी पीरियड त्यो हो जसमा एक चक्र अवधी दोस्रो चक्रको भन्दा लामो हुन सक्छ, या त्यो धेरै छिटो-छिटो हुन थाल्छ या असामान्य रूपले लामो अवधिले एकदम बिग्रिन थाल्छ। किशोरावस्थाको पहिले केही वर्षहरूमा अनियमित पीरियड हुनु के सामान्य कुरा हो?हां, शुरूमा पीरियड अनियमित नै हुन्छन्। हुन सक्छ कि लडकीको दुई महीनाहरूमा एक पल्ट हो या एक महीनाहरूमा दुई पल्ट हो जाए, समय संग-साथ उनी नियमित होते जान्छन्।
अनियमित महिनावारीको कारण के हो?
जब पीरियड असामान्य रूपमा छिटो-छिटो हुन्छन् त उनको कारण हुन्-
(1) अज्ञात कारणहरूले इन्डोमिट्रोसिस हुन्छ जसबाट जननेद्रियमा पीडा हुन्छ र छिटो-छिटो रक्त स्राव हुन्छ।
(2) कहिले काँही कारण स्पष्ट हुँदैन तब भनिन्छ कि महिलाको अपक्रियात्मक गर्भाषय रक्तस्राव भएको छ।
(3) अण्डकोषको पुष्टि
सामान्य पांच दिनको अपेक्षा यदि महिनावारी रक्त स्राव दुई या चार दिनको लागि चले त चिन्ताको कुनै कारण हुन्छ?
हैन चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। समय संगै पिरियडको स्वरूप बदलिन्छ, एक चक्रले दोस्रो चक्रमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ।
भारी, लामो र अनियमित पीरियड भएमा के गर्नु पर्छ?
(1) महिनावारी चक्रको रिकर्ड रखें- कब खत्म हुए, कति स्राव भयो (कितने पैडमा काममा आए उनको संख्या नोट करें र उनी कितने भीगे थे) र अन्य कुनै लक्षण तपाईंले महसूस गरे हो त उसलाई पनि शामिल करें।
(2) यदि तीन महीनाहरू भन्दा ज्यादा समय सम्म समस्या चलती रहे त डाक्टर से परामर्श करें।
माहवारीको अभाव के हुन्छ?
यदि 16 वर्षको आयु सम्म महिनावारी न हो त उसलाई माहवासी अभाव भन्छन्ं। कारण हो- (1) आइमाइको जनन तन्त्रमा जन्म से होने वाला विकास (2) योनि (योनिच्छद)को प्रवेशद्धाराको झिल्लीमा बाटोहरूको कमी (3) मस्तिष्कको ग्रन्थियहरूमा रोग।
बाहिरी कडिहरू [सम्पादन गर्ने]
रजोधर्म / महिनावारी के है?
TREMIN Trust archive of menstrual cycle data
This article has been translated possibly either from English Wikipedia or from Hindi Wikipedia using Google Translation and then by using Nepali Wikipedia Translator or Online Nepali Wikipedia Translator The translated text might have some typos and erros. You can edit to fix this by clicking here नेपालीमा अनुबाद गर्नुहोस:यो पृष्ठ मासिक_धर्म बाट नेपाली विकीपिडियामा उल्था गरिएको हो । यसमा व्याकरणहरु को शुद्धता लाइ सच्याउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि यस पृष्ठलाइ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
"http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मासिक_धर्म&oldid=327154" बाट निकालिएको	श्रेणीहरु: नेपालीमा उल्था गर्नु पर्नेNWTस्वास्थ्यजीव विज्ञानमानव शरीर	नेविगेशन मेनू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २१:०२, २१ मार्च २०१३ मा परिवर्तन गरिएको थियो।